Global Voices teny Malagasy » Nalaina an-keriny, Fa Mbola Ao Anatin’ny Fahatsiarovan’ireo Syriana Hatrany i Sameera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Oktobra 2015 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra مرسيل شحوارو Nandika (en) i Amira Al Hussaini, Tantely
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Yasin Al Haj Saleh sy Sameera Al-Khalil. Sary avy tamin'ny pejy Facebook-n'i Yasin Al Haj Saleh.
Voahodidin'ireo namana maro izay mangataka torohevitra aminy momba ireo olana mikasika ny fahaketrahan'izy ireo manokana izy. Maninona moa, satria ve efa niaina izany rehetra izany izy? Nodiaviny daholo ireo dingan'ny adinay Syriana rehetra, ary mbola eo ampiandrasana ny fahataperany izy hatramin'izao, amin-panantenana lehibe tokoa, izay mahatonga anao ho menatra amin'ny halemenao.
Ny finamànanay — ary tsy fantatro loatra na afaka antsoina hoe finamànana izany, satria toy ny ray mpiahy ahy kokoa izy ho ahy sy ireomitovy amiko — dia nanomboka fony aho nanoratra ho azy tany am-piantombohan'ny revôlisiôna Syriana, isaky ny nasaina tamin'ireo fivoriana na resadresaka ho an'ny daholobe aho. Tsy nahalala ny tena fototry ny foto-kevitry ny asam-bahoaka aho, ary te-hangataka torohevitra taminy, amin'ny antsipirihany mihitsy. Matetika manaiky ny heviny aho ary manaraka ny toroheviny. Tia mandefa aminy ireo lahatsoratra izay feno tsipelina diso maro aho, toy ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany, ary na teo aza ny fahasahiranany manokana, namaky hatrany ireo zavatra rehetra nosoratako izy ary nankahery ahy toy ny ray. Nanome ny endrika rehetra ny maha-ray tadiavintsika amin'ny fotoana fahatanorantsika izy.
Mpampianatry ny fanantenana i Yasin Al Hajj Saleh. Tsy natao hanindrahindràna ireo asa-sorany sy ny maha-azy ito lahatsoratra ito, fa fanandramana ny hampita amin'ny hafa ireo zavatra momba azy izay manainga fanahy antsika. Fanandramana milaza ny tany tontolo ilay tantara izay, na teo aza ireo alahelony rehetra, mandefa hafatra miverimberina: raha toa ka afaka mitsiky manoloana ny fanantenana izy, inona ny fialantsininao?
Nosamborina i Yasin fony izy 19 taona ary nandany 16 taona tany am-ponja. Tao anatin'reo voalohany nanoratra ny revôlisiôna Syriana izy ary niaina izany. Nitondra io tsy fahatomombanana ara-tsosialy izay narafiny tany am-ponja io izy, nandritry ny taona lava niainany tany am-ponja. Rehefa manohitra azy momba an'io ianao, mihomehy fotsiny izy ary miteny hoe: “Sameera. Ny fifandraisana ara-tsosialy no teboka maatanjaka tena nananany. Sameera no olona iray nahavita nanangona ny olona nanodidina azy.”
Izany, angamba, no mety ho lohahevitr'ity lahatsoratra ity: ny fitiavany an'i Sameera vadiny, izay nalain'ny Tafika Silamo Mitam-piadiana an-keriny tany Ghouta, tafika tarihan'i Zahran Alloush miaraka amin'ireo namany Razan, Wael sy Nadhem, ary tsy mbola fantatra ny misy azy ireo.
Isaky ny mitsidika azy any amin'ny trano hofainy ianao, milaza amim-pireharehana ny tantaram-pitiavan'ny Grika iray namany izay manambady vehivavy sembana izy. Tsy nisy zavatra niova tao amin'io trano io, afa-tsy ny fanangonana ireo boky amin'ny teny Arabo sy ny sary milokon'i Sameera mihantona izay tazany tsara avy ery amin'ny fianarany. Ao amin'ireo resany foana izy, amin'ireo zavatra soratany sy ny antsipirihan'ny fiainana andavan'androny. Ary miezaka mafy ny mandraikitra ny fahabangany ao amin'ireo fahatsiarovan'ireo Syriana izy. Tsaroanay ny fitsingerenan'ny taonany. Natahotra tamin'ny fanamelohan-tenany amin'ny fahabangany izahay. Tena resy lahatra ny tsy fahafahanay manova ny zavatra mitranga izahay. Namela azy ho lavo indray ve izahay, amin'ny maha-Syriana?
Hitanay ao anatin'ny hatezerany sy ny faniriany izy, ary ao anatin'ny adiny ho amin'ny zony hiaraka aminay. Hitanay ao amin'ny toetra maha-ray aman-dreny amiko izy. Isaky ny mahita ny alahelo eo amin'ireo masony aho, tsapako fa ny fahabangan'i Sameera amin'ny fiainanay rehetra dia mitovy amin'ny famoizana ny reniko tao anatin'ny revôlisiôna Syriana indray. Rahampitso, rehefa hiverina i Sameera—tsy misy aminay sahy hieritreritra fa tsy ho tafaverina izy— ho taitra mafy izy hahita ny isan'ireo Syriana izay mahatsapa ny maha-eo azy, na tsy misy fantany aza izy ireny.
Na teo aza ny alahelo amin'ny fahabangàny sy ny nanjavonan'ny anadahiny tany amin'ny fonjan'ny ISIS, na teo aza ny fanaovany sesintany ny tenany sy ireo fahatsiarovany ny fonja, mbola manoratra momba ireo tokony ho fanao sy ny fanantenana ihany i Yasin, ary mbola mampianatra anatsika ihany hoe raha afaka manova ny fandehan'ny fiainantsika ireo mpaka an-keriny, dia miankina tanteraka amintsika kosa ny fomba iainantska ao am-pontsika.
Tsy nanova ny fitiavany an'i Sameera na ny fahatsapàna na ny fanamelohan-tena, na hoe voaovan'ny tsy fahaiza-miainan'ireo mpaka an-keriny. Tsy voaloton'ny fiampangàna sy tsahotsaho ny fitiavany azy. Manery antsika amin'ny maha-Syriana antsika hitsangana eo amin'ny alahelo ny fitiavany azy, ary mirary azy ireo hanana fanombohana tsara.
Andao hakipy ny masontsika ary hirary an'i Sameera, Razan, Wael sy Nadhem hiverina an-trano, hitsangana izy ireo, sahala ny nataony hatrizay, ho an'ny zon'ireo vehivavy naiditra am-ponja sy nahilikilika, ho azy ireo mba hanorina, mety hoe miaraka, hetsika izay miaro ireo tratry ny fanjavonana an-terisetra.
Sameera Al-Khalil ,gadra politika teo aloha , mpisolovava ary mpiaro ny zon'olombelona, Razan Zaitouneh, vadiny, injeniera sy Wael Hamadeh mpikatroka mafana fo , ary Nazem Al Hamadi mpisolovava sady poeta, samy nanjavona tsy hita tany Douma, Syria, ny Desambra 2013. Fantatra amin'ny hoe The Douma Four (Ireo Douma Efatra) izy rehetra miaraka ireo. Natolotra ho an'ny adin'izy ireo ito bilaogy  ito.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/06/75223/
 ito bilaogy : https://douma4.wordpress.com/